Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): ကချင်အမျိုးသား MMA Fighter ,Aung la Nsang(Burmese Python)အနိုင်ရ
ကချင်အမျိုးသား MMA Fighter ,Aung la Nsang(Burmese Python)အနိုင်ရ
at 8/18/2013 11:47:00 AM
click on link MMA
ဒီနေညနေ USA,နယူးဂျာစီ တွင်ထိုးသတ်သောMMA လက်ဝှေ့ပွဲ တွင် " ကချင်အမျိုးသား MMA Fighter ,Aung la Nsang(Burmese Python) ကို ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ Shedrick Goodridge က ဒုတိယအချီ အရောက်မှာ အရှုံးပေးသွားတဲ့အတွက် ယခုပွဲမှာ အောင်လအင်ဆန် က ပြတ်ပြတ်သားသား အနိုင်ရရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါသည်။
Aung la nsang(Burmese Python)
Thank you God for blessing me with the victory. Thank you friend, family and fans for the unending support. Love you guys.
(By- Aung La N Sang)
Kachin Movie (the first of Malaysia Kachin DVD mov...
American mungdan Yale University hte Florida Unive...
စစ်ဝါဒီတွေရဲ့ မဟာဗမာ လူမျိုးကြီးဝါဒ ( video click ...
Myi N-pu Hta.
Interview with Bran Shaung- Kachin Youth Activist
Bum Chyangau hpang de Shagun ai Laika
Ethnic alliance hammers out political framework be...
SHAN JAK RUNG
Kachin can be key state in accelerating Myanmar's ...
ရှစ်ပြည်နယ် အရေးနှင့် ဗမာပြည်နယ် သတ်မှတ်ရေး ကိစ္စအေ...
Mai gan du W.P myu sha niamatu shaman ga....
Terrorized Htann Gone village in Shwebo District o...
Reform က ကချင်လူမျိုးတွေအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးရှိသလဲတဲ...
PROFILES IN FREEDOM: BAWK JAR LUM NYOI
Western-funded green groups ‘stir up trouble’ in C...
Ning htoi rai nmu lu nga ai ( shagun laika )
၂၀၁၅ တွင် လယ်သမား တပ်မတော် ပေါ်ပေါက်ရန်ရှိနေပါသည်။....
ကိုယ်က မမှားဘူး ဆိုရင် လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာကြီးကို ...
KDA, Kawn Buga Gata LAMU GA Dut Mari Ai Hpe Pat Hk...
TSIN YAM MASAT JAW NA
ဘာ့ကြောင့် ဗမာလူမျိုးတွေအပေါ်မှာ ဒီဗမာမဟုတ်တဲ့ တို...
Gap jahkring hte Simsa lamalachyum Daw- ( III )
ကချင်အမျိုးသား MMA Fighter ,Aung la Nsang(Burmese ...
What is Genocide? ( click on video link )
Shawng lam Daw ( II )
Sara Lamung Tu Lum gaw American mungdan Florida mu...
Tengman ai lam hpe mung shawa de sang lang ai lam ...
Shagrau shaadat ai lam!( KNO Ndau shabra laika)
Gap jahkring hte Simsa lamaLachyum Daw ( II )
KIO Chairman warns of divisive plots on Kachin Mar...
"ငြိမ်းချမ်းရေးဖခင်ကြီး သခင်အောင်မင်းတို့အဖွဲ့က ပြ...
KIO?KIA ကအိုင်အို/အေသည် မည်သည့်လူမျိုးစုကို ကိုယ်...
ကလေး/လူကြီး မချန်တဲ့ မြန်မာ့မုဒိန်းတပ်မတော်
ဖော်ပြထားသော ပုံများမှာ ကြေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ရှေ...
တိုင်းရင်းသားတောင်းဆိုချက် လိုက်လျောဖို့ အမေရိကန်ပ...
UNFC Statement of the Ethnic Nationalities Confere...
မိုးကုတ်ကျောက်သူဌေး ဦးယောဆက်နဲ့ အင်တာဗျူး
Pang lung matut ( 98,99.100.101 )
Kachin civilian allegedly killed by Burma army in ...